Azaliba Mall, Cumaan
At ACE Archi, waxaan ku faannaa kartidayada inaan abuurno xitaa naqshadaha ugu adag annaga oo aan wax u dhimayn deg -degga ama tayadayada. Waxaan aaminsanahay inaad u qalanto sida ugu wanaagsan ee ay tahay in warshadu bixiso, taasina waa waxa aan ku siinno.
Adeegyadayada iyo kartidayada kala duwan ee ballaaran ayaa kaaga tagaysa tiro aan la koobi karin oo suurtagal ah, markaa xor u noqo inaad noqoto mid hal -abuur leh sidaad jeceshahay codsiyadaada. Iyada oo leh adeegyadeena kaladuwan ee cajiibka ah iyo qiimayaasha tartamaya, waxaad hubtaa inaad noqon doonto mid kale oo ka mid ah macaamiisheena badan ee ku qanacsan.
Casaan Dheeraad ah
Waxaa degay The Lake Residence, USA